Alakamisy 05 Mey 2016
Toriteny Alakamisy 05 Mey 2016
Salamo 47 , 1 – 9 ; Lioka 24 , 44 – 53 ; Kolosiana , 1 – 4
Kolosiana 3, 1 – 4 no teny andraisana hafatra ho antsika amin`izao ANDRO NIAKARANA izao. Tsara ny manamarika fa anisan`ny Fety Kristiana izay tena manandanja tokoa ny fahatsiaroavana ny NIAKARAN`NY TOMPO any an-danitra na ny ANDRO NIAKARANA izany. Tsy azo esoriana ao amin`ny tantaran`ny Fiangonana io fety io ary tsy ho voakosoka mihitsy koa ao amin`ny tantaran`ny famonjen`Andriamanitra izao tontolo izao. Raha dinihina ny fiainan`ny Fg , ny Kristiana anefa dia hita fa latsa-danja noho ny Fety kristiana rehetra ny ANDRO NIAKARANA, raha ny ANDRO KRISMASY ahatsiarovana ny nahaterahan`ny Tompo dia feno fifaliana ny olona mankalaza ny Tompo, tsara fiomanana amin`ny lafiny rehetra. Izany hoe : raha hankalaza ny fahaterahan`ny Mpamonjy , ny fahatongavana tety an-tany dia tena faly ny olona fa ny niakarany any an-danitra kosa adinon`ny olona matetika. Hita taratra amin`izany fa mbola variana amin`ny fiainana eto an-tany ny olona fa tsy mahay mibanjina ilay tena fiainana dia ny fiainan-danitra. Ampy ho antsika ve ny fiainana eto an-tany. Hifarana eto ve ny fiainatsika ? sa mba manantena ihany isika fa ilay JK niakatra any an-danitra dia nanomana toerana handraisana antsika ka tokony hitodika, hibanjina izany isika. Ity Kolosiana 3, 1 – 4 ity ary dia mampitodika antsika tena hibanjina, eny hikatsaka tokoa ny fiainan-danitra fa tsy ho variana fotsiny amin`ny fiainana mandalo eto an-tany ihany. Hita taratra eto amin`ity Kolosiana 3 ary ny tokony ho fiainana, fitondran-tenan`ny mpino manantena marina ny fiainana ao amin`Andriamanitra.
1. Mikatsaka marina ny fiainana any ambony (mikatsaka ny fiainan-danitra)
Raha jerena ny hafatra apetrak`i Paoly apostoly ho an`ny Fiangonana tao Kolosia eto dia mifamatotra tanteraka amin`ny fiainan`i Jesoa Kristy ny fiainan`ny olona milaza fa mino Azy.
Nitsangana tamin`ny maty nandresy ny fahafatesana ny Tompo. Mandray sy miaina izany fandresen`i Jesoa Kristy izany koa ny mino Azy. Tamin`ny fotoana niarahan`i Jesoa Kristy tamin`ny mpianatra no efa nanamafisany sy nitaomany ny mpanaradia Azy mba hikatsaka marina ny Fanjakany, ny Fanjakan`Andriamanitra no tiany ambara amin`izany. Niakatra any an-danitra ny Tompo rehefa avy nandresy ny fahafatesana noho izany ny mpino Azy koa dia tokony ho isan`izay hotafaraka Aminy ho amin`izany fiainana any an-danitra izany. Tsy ho variana eto an-tany ihany fa hieritreritra ny fomba ahazoany miaraka amin`i JK ao amin`ny Fanjakany ao an-danitra.
Eto ary dia mitaona ny Mpino Kristiana hibanjina, hikatsaka marina tokoa io toerana misy, niakaran`i Jesoa Kristy io i Paoly Apostoly raha manoratra izao Kolosiana 3 izao. Hoy ny and.2 …. Teny mitaona sy mitarika ny mpino hibanjina na hikatsaka marina ny zavatra any ambony izany, hikatsaka ny fanjakan`Andriamanitra. Midika hoe : aza dia variana loatra amin`ny fiainana eto an-tany izay mandalo sy miserana ihany fa katsaho sy banjino ilay fiainan-danitra, fiainana maharitra mandrakizay, fiainana tena ao amin` Andriamanitra, eny fiainana ao amin`ny fanjakan`i Jesoa Kristy.
Niakatra any an-danitra ny Tompo, niakatra ho any amin`ny voninahiny, nisandratra ho amin`ny maha-Mpanjaka Mpandresy Azy. Io toerana misy an`i Jesoa Kristy io no tokony hobanjina. Raha ny tantara ao amin`ny Soratra Masina no jerena dia mazava fa rehefa niakatra ho any an-danitra ny Tompo, ny mpianany kosa niverina nanokana fotoana hankalazana sy hanomezana voninahitra an`Andriamanitra. Fotoana nivavahana ( Lio.24,50 – 53 ). Ny olona misaina ny any an-danitra dia ny olona mahay manokana ny fotoany hankalazana an`Andriamanitra, hanomezana voninahitra an`Andriamanitra, mivavaka amin`Andriamanitra.
Ry havana malala, mahatsiaro isika ary ankehitriny fa NIAKATRA any an-danitra ny Tompo. Tarihina isika hisaina, hibanjina ny any an-danitra. Matetika tokoa mantsy ny mahamaika ny olona dia ny ento an-tany ihany. Amin`ny maha-olombelona nofo aman-dra mety ho marina ihany izany. Kanefa amin`ny maha olona maniry handova ny Lanitra antsika dia saino ny any ambony, saino ny any an-danitra. Matetika ny olona rehefa manao zavatra dia izay hampisongadina azy, izay ahazoany voninahitra eto an-tany no mahamaika : ny fisehosehoana, ny fanandratantena eny ny zavatra ny tany ihany. Fa manomboka izao kosa taomina isika saino ny zavatra any ambony . Omeo ilay Tompon`ny Voninahitra ny voninahitra tokony ho Azy , Salamo 47 . Ary izany fisandratran`Andriamanitra izany sy ny fanandratana Azy no tokony hameno ny fontsika mba ahatonga antsika hiara-manana fiainana Aminy.
2. Miaina ny fiainan`ny any ambony (miaina ny fiainan`ny olona mandova ny lanitra)
Rehefa nasaina, notaomina hibanjina ny fiainana ao amin`ny Fanjakan`Andriamanitra ny mpino dia ambara fa ny fiainan`ny Mpino dia miafina ao amin`i Jesoa Kristy. Toa midika izany fa tokony hiavaka ihany koa ny fiainan`ny mpino eto an-tany, fiainana mifanaraka amin`ny fiainan`i Jesoa Kristy . Toa aseho eto fa ny olona mino ny fiakaran`i Jesoa any an-danitra sy ny fandraisany ny fahefana rehetra dia manana fiainana mifanaraka tsara amin`izany finoana izany. Ny fiainan-danitra no fiainana iainan`ny mino noho izany tsy ny fiainana hita maso sy mandalo no tokony ahavariana azy fa ny fiainana ny zava-panahy.
Eny mihoatra noho izany aza dia tokony hotsarovany sy heken`ny mino fa ny fahafatesan`i Tompo dia manambara koa fa maty tamin`ny fahotana ny mino, afaka tamin`ny fatoran`ny ota. Ny fahaveloman`ny Tompo, ny fitsanganan`ny tamin`ny maty dia manambara fahaveloman`ny mino ho amin`ny fiainam-baovao. Noho izany mila miaina mifanaraka amin`ny fiainan`ny olombaovao ny mino afaka marina tamin`ny fatoran`ny fahafatesana. Miaina amin`ny fiainanan`ny any an-danitra ny mino manantena izany.
Tsy afaka mifanindry an-dalana eo amin`ny fiainan`ny olona ny fiainan`ny faharatsiana sy ny fiainan`ny fahatsarana. Tsy afaka mifanindry an-dalana eo amin`ny fiainan`ny olona ny fiainana eto an-tany voafatotry ny faharatsiana sy ny fiainan`ny fanjakan`ny lanitra mitaky fahamasinana.
Eto ary dia mazava ny toro-marika omen`Andriamanitra ny mpino manana fanantenana, mino fa handova tokoa io Fanjakan`Andriamanitra io. Niakatra any an-danitra ny Tompo, misy toerana namboariny ho an`ny mino Azy any. Noho izany izay manana izany fanantenana izany eto an-tany dia tsy maintsy miezaka sahady, eny manao ny ainy tsy ho zavatra miainana sahady ny fiainan-danitra. Ho an`ny olona manantena fa isan`izay efa miaina amin`ny Fanjakan`Andriamanitra dia aseho mazava fa tsy afaka miaraka eo amin`ny fiainana ny zavatry ny tany sy ny zavatry ny lanitra.
Ry havana malala, mankalaza ny Tompo amin`izao Andro Niakarana izao isika. Niakatra any andanitra nanamboatra fitoerana ho antsika ny Tompo. Noho izany tarihina isika amin`izao tombon`andro iainantsika izao dia ho tombon`andro iainana sahady ny fiainana ao amin`ny fanjakan`Andriamanitra. Tarihina isika mba hiala amin`ny fiainana mifanoitra amin`ny sitrapon`Andriamanitra. Hoy ilay Mpitandrina nitondra fampianarana omaly teto am-pg, hazakazaka miakatra no hazakazaka ataon`ny kristiana. Mitaky ezaka, mila hery izany. izay manana hery no tafakatra araka izany. Fa raha hazakazaka midina na dia ny lavo aza mety ho tonga voalohany. Mikodiadia fotsiny tokoa. Mazava araka izany fa tsy mandeha ho azy ny fiainan`ny mino manantena ny Fanjakan`ny lanitra fa fiainana mitaky ezaka amin`ny fiarahana amin`i JK, mihazakazaka amin`ny fiainana tsara ao amin`i Jk ka mitaky finoana sy fiainambaovao. Fa tsy fiainana mandeha ho azy ka izay tiana atao ihany no atao.
Ry havana malala, niakatra ho any an-danitra ny Tompo. Mitafia toetra vaovao, toe-panahy vaovao raha tianao tokoa ny hiaraka amin`ny Tompo ao amin`ny toerana efa namboariny ho anao. Mety hilaza ianao hoe : mbola ho ela izany, kanefa aza manjehy ny andro lava. Ny tombon`andro omen`ny Tompo ho anao dia tombon`andro hanomanana ny ho avy rehefa miala amin`izao fiainana hita maso izao ianao.
Hoy ny hafatra eto hoe : and.2,3 Amena